Igama lomnxeba Umthombo kunye negama lokugqibela igama
I-SHOOK Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
Kuthetha ukuthini igama elidlulileyo?
Inkqonkqo Ukutshukunyiswa kukutshintshana kwegama leJamani laseSwhuck , elivela kwi- scouh , elisentsingiselo esithi "umcengezeli." I-Schoch iyintlukwano eqhelekileyo yaseSwitzerland kwaye "iSchook" okanye "Schoock" iyafumaneka eNetherlands.
Igama elongezelelweyo Ukuchazwa kwegama : SHUK, SHOCK, SHOCK, SCHOCH, SCHUCK, SCHOOK, SCHOOCK, SHOOCK, SCHOKE, SCHHECH, SCHUSKE
Igama lomthombo: isiJamani
Kuphi kwihlabathi iWorld SHOOK Igama?
Ngokutsho kwe-Forebears, isibongo seSokok sixhaphake kakhulu e-United States naseGuam.
Isiqendu sokuqala sesiJamani saseSweden sisasetyenziswa kakhulu eJamani, ngokukodwa kwiphondo yaseRheinland-Pfalz ngokweWorldNames PublicProfiler. I-Shuck nayo ifani eqhelekileyo kwi-Pest, eHungary.
Iimpawu zokunikezela ngegama laseJamani e-Jamani kwiVerwandt.de zichonge igama le-Schuck njengezona ziqhelekileyo eMiltenberg, zilandelwa nguAschaffenburg, eBerlin, Kusel, München naseKaiserslautern.
Abantu abaPhezulu abaneSurname yegama
UEdwin M. Shook - umvubukuli waseMerika kunye nomfundi weMeya
I-Travis Shook - i-American jazz pianist
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name SHOOK
Iintsingiselo zegama eliqhelekileyo lamaJamani
Ukufumanisa intsingiselo yegama lakho lokugqibela lesiJamani kunye nesi sikhokelo samahhala kwiintsingiselo kunye nemvelaphi yegama eliqhelekileyo lamaJamani.
Ukugubha iCrest Family - Akusikho into oyicingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto enjengokwentsapho yaseSokok okanye isambatho seengalo kwisigama seSokok. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
Igama loShukumo lweDNA
Le projekthi yemfuza yokuzalwa yomzimba ivulelekile kubo bonke abantu abaneenferensi i-Hahn kunye neentlobo ezinjengeSchoke, Schuch, Schuske, Shuck, abanomdla wokusebenzisa i-DNA kunye nophando lwemihla ngemihla ukuze baqaphele oothixo baseHahn.
Idibanisa iSigqeba soLuntu lweNzala
Khangela le bhansela ethandwayo yohlobo lomnxeba wefowuni yeShook ukuze ufumane abanye abangaphanda ookhokho bakho, okanye uthumele umbuzo wakho wegama lomnxeba.
Uhlobo lweNtsapho -SHOOK Genealogy
Hlola iziphumo ezingaphezulu kwama-500,000, kuquka iirekhodi ezigciniweyo, ukungena kwedatha, kunye nemithi yentsapho ye-intanethi yegama lomnxeba weSokok kunye nokuhluka kwayo kwi-website ye-FREESearch Family, inceba yeCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
I-SHOOK Igama lomnxeba kunye neeNcwadi zoLondolozo lwentsapho
RootsWeb uyabamba uluhlu lokuposa lwamahhala kubaphandi begama leShowok.
DistantCousin.com - INDLELA YOKUBHALWA KWABANTU YABANTU NEMIBUZO YENTSAPHO
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lokugqibela.
Iirekhodi ze-GeneaNet - Shook
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweengxelo, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abanomnxeba weShook, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
I-Genealogy Shooky and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zemveli kunye neembali zabantu ngabanye abanegama lomnxeba weSokok kwi-website ye-Genealogy Today.
Jr. okanye II?
I-HERNANDEZ Igama lomnqophiso nomxholo
I-DELGADO Igama lomntu igama kunye nomthombo
XHUMANA - Igama lomnqophiso kunye neMvelaphi
Igama lomninimzi we-WEST kunye neMvelaphi
I-CHAVARRIA - Igama lomnqophiso kunye nentsapho yembali
IJORDAN Igama elithi Nomsuka
Ngomfanekiso we-Skating Waltz Eight
Iingcebiso Ezilishumi Zearhweba Abakufihla Izingozi Neentlekele Zemvelo
IGiganotosaurus, iSiant Southern Lizard
Ukuziphendukela Kwemvelo kuchaza i-Zebra Stripes
Isidlo sokugqibela sikaYesu nabafundi bakhe (Marko 14: 22-25)
I-Red Thread yobuYuda
Inkcazo yeMetathesis kwi-Phonetics
Iingcaphuno zothando zentlungu
Indlela yokubeka iivili zeTrailer kunye namaTires
I-Vest-Style vs i-Back Inflation ye-BCDs: iiPros and Cons
Akunjalo nje kuwe
I-Pipeline ye-Dakota Access
I-Model Model ye-Savage 10ML-II I-Powder engabikhoyo
2016 Izikhundla zoMongameli weRiphabhliki
John G. Roberts Biography
Vula Iiklasi ZesiXhosa kwiNgesi
Ingxoxo: IiNkcukacha zoBuntu
Ngaba zikhona iziganeko zesono kunye nesijeziso esihogweni?
Ababaleki bafunwa yi-FBI yokuBulala